Akezwani nemibono ebhidlizayo | Ilanga News
Home Impilo Akezwani nemibono ebhidlizayo
Kuzovela nasuke eyokwenza phesheya kwiBeing Bonang
UBONANG Matheba ungomunye wosaziwayo abenza kahle kakhulu eNingizimu Afrika kanti useqalile noku-zakhela igama nasemazweni angaphandle.
Le ntokazi enohlelo lwayo olusanda kukhuza ibuya kumabona-kude eziteshini ezingaphansi kwe-DStv, i-1Magic neMzansi Magic, iBeing Bonang, kayiconsi phansi kulezi zinsuku kwazise isanda ku-veza ukuthi kuyihambela kahle empilweni njengoba izinto ezi-nhle ziqhubeka nokuyilandela.
Ukuthola ithuba lo-kuba nengxoxo ekhe-thekile nayo, kakwa-ndele abaningi kwazise imatasa futhi kumele uhlele kusenesikhathi uma unesifiso esi-fana nalesi.
Muva nje uBona-ng utheleke eThe-kwini ehambele umcimbi weVodacom Durban July. ILANGA lithole ithuba lokuba ne-ngxoxo naye enda-weni yokudlela
iCargo, eShaka Marine World.
Ngaphambi ko-kuba sihlale noBonang, uqale wazilu-ngisa kwazise ubeha-mba nomphaquli wa-khe, nalowo omenza ikhanda. Ngi-salinde ukuxoxa naye ngibuka bempha-qula, kuvele kwangicacela ukuthi le ntokazi iyazithanda futhi ifuna ukuhlala ibukeka ngaso sonke isikhathi.
Siqala ingxoxo, ikuvezile ukuthi kubalulekile kuyona ukuhlala ibukeka iqhakazile futhi isesime-ni ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuvele kwangikhumbuza ezinye zezinkulumo ezike zavela kwenye inkundla yokuxhumana ngesikha-thi uhlelo lwakhe lusanda kuqala lapho abantu bakhala khona ngokuthi lolu hlelo kaluvezi okuyikho ngalo saziwayo.
Kulolu hlelo uBonang ubevela eqhakazile ngisho evuka ebutho-ngweni okwenze abantu baba no-ngabazane ukuthi lolu hlelo luve-za okuyikho. UBonang ekhuluma neLANGA, uthe selokhu kwathi nhlo akazikhathazi ngabantu aba-nemicabango emibi.
“Ngiyezwana nabantu abahlale becabanga okuhle nokuphokophela phambili, kanginaso isikhathi semimoya emibi. Yingakho ngibagudluza abantu abacabanga oku-buyiselana emuva ekubeni ngiya phambili.”
Uthi uyazi ukuthi ngeke atha-ndwe yibona bonke abantu kodwa uyakujabulela ukuthi bakhona fu-thi baningi abamthandayo aba-hlala bemfisela okuhle ngaso sonke isikhathi.
“Labo abalandela uBonang ngiyajabula ngabo futhi ngibathe-mbisa ukuqhubeka nokuba yisibonelo esihle kubona.” UBonang uthi okumenza andizele phezulu kulezi zinsuku wukuthi isiphuzo sakhe sewayini, iHo-use of Bonang senza kahle kanti maduze sizoqala ukuthola-kala nakwamanye amazwe okuyi-nto emjabulisa kakhulu.
Uthi ngaphandle kwalesi si-phuzo, nezingubo zakhe zanga-phansi zabesifazane zisaqhubeka nokwenza kahle esitolo esikhulu iWoolworths. Mayelana nokubuya kohlelo lwakhe kumabonakude, uthe abantu bazobona izinto asu-ke ezihambele phesheya kwezi-lwandle.
“Iningi labantu uma lingibona ngiphesheya kwezilwandle lica-banga ukuthi ngisuke ngizizulela nje. Kakunjalo, esikhathini esini-ngi ngisuke ngihambe ngokomsebenzi engiwenzayo wokuphatha uhlelo emicimbini emikhulu eya-hlukene.” Echaza ngokuhambela amazwe, uveze ukuthi kumvula amehlo ngokwenzekayo kwezinye izindawo kanti kuyamkhulisa ngokomqondo.
“Kuyakhulisana ukubona usi-kompilo olwehlukile kwamanye amazwe. Mina uma ngihambele izwe ngiyaqinisekisa ukuthi ngiya-funda ngaso sonke isikhathi.” le ntokazi ike yaba sematheni ngokujola no-AKA ongumrepha odumile kuleli nakwamanye amazwe.
Ucele ukungaphawuli ngobu-dlelwano bakhe no-AKA. Kuzo-khumbuleka ukuthi ukuxabana kwakhe noSomizi Mhlongo abebe-ngabangani abakhulu kube sematheni kwaze kwafinyelela nakwabezindaba. Ukuqinisekisile ukuthi yena noSomizi bayezwana fu-thi ukungaboni ngaso linye yinto esidlulile.
Okungicacelayo ngale ntokazi wukuthi iyaqeqebula uma ibuzwa ngezithinta umsebenzi kodwa uma kukhulunywa ngempilo yayo yangasese, ishaya ngamafuphi. Lokhu kungenze ngabona ukuthi kayikukhonzile ukusabalalisa izindaba zayo zangasese emphakathini nakuba sekubikwe kakhulu ngazo. Wenqabile nangokuphawula ngamahlebezi ake asabalala okuthi usethole uthando kusomabhizinisi waphesheya kwezilwandle. Ngokubona ukuthi le ntokazi kayi-khululeki ngemibuzo yempilo yayo yangasese, ngibe sengiyibuza ngokuthi iyasithola yini isikhathi sokuphumula njengoba ibukeka imatasa kangaka.
UBonang uthe nakuba eha-mbela amazwe amaningi kodwa kalikho izwe elidlula elakuleli, ikakhulukazi iKwaZulu-Natal.
“Abantu abaningi kabazi ukuthi iTheku ikakhulukazi iBallito kusenhliziyweni yami njengoba ngesikhathi umama wami esasebenza kwaHullet bengifika njalo ngamaholide ngizovakasha.
“Namanje uma ngifuna ukushaywa wumoya ngiza khona ukuze ngikwazi ukushaywa wumoya wolwandle,” kusho yena eqala emamatheka.
UBonang usanda kumenyezelwa njengozoba ngu-methuli wo-mncinti-swano wozime kuleli, uMiss SA wano-nyaka emcimbini ozoba ngomhla ka-9 ku-Ncwaba (August) eSun City, eNorth West.
Previous articleUKomphela uyamaniswa neMamelodi Sundowns
Next articleBazodlisela ngamanoni akudala kwimpucuzeko